Kuwani waa qaar ka mid ah hadiyadaha ay Apple u fidiso shaqaalaheeda | Waxaan ka imid mac
Apple wuxuu bilaabay inuu wax ka qabto hadiyado kala duwan oo la siiyo shaqaalaha “kasbaday” iyaga. Waxaan ku hadleynaa ereyadan maxaa yeelay waxaan leenahay dhinac hadiyadaha aad siineyso shaqaalaha ka soo gudbay loolanka Apple Watch ee "xiridda faraantiga." Dhinaca kale, wuxuu sidoo kale hadiyad gaar ah siinayaa kuwa loo xilsaaray inay ku abuuraan AirTag. Dhammaan faahfaahinta dhinaca shirkadda iyo tafaasiisha qaarkood oo aan ku arki doonno dhawr sano gudahood guryaha xaraashka.
Xubnaha kooxda abuuray Raad -raacayaasheyda waxay helayaan hadiyad aad u gaar ah oo asal ah. Jir ay ku jiraan lix AirTags oo shaqsi ahaaneed leh saxiixyada xubnaha kooxda gudaha jir galaas xarrago leh. Waxaan aragnay hadiyaddii shaqsiyeed ee AirTag iyada oo ay ugu mahadcelinayaan sawirka ay wadaagaan naqshadeeyaha alaabta Apple Frank de Jong oo ku jira LinkedIn Bartamaha jirku waa saxanka dambe ee birta ah ee AirTag. Hareeraheeda waxaa ku yaal lix koofiyadood oo AirTag ah oo cad oo goobaabin samaynaya, mid walbana ay ku jirto saxeexa mid kasta oo ka mid ah injineerada sameeyay kooxdii u oggolaatay aaladda inay arkaan iftiinka.
Sawirka waxaa qaaday Frank De Jong
Waxaa sidoo kale la ogaa in Apple ay soo saartay gaarsiinta hadiyadaha sannadka 5 -aad oo xiriir ah ee abaal -marinta shaqaalaha ku guuleystay inay dhammaystiraan loolanka Apple Watch of Xidh siddooyinkii. Markan waxay yihiin saddex tuwaal oo Apple Fitness ah oo loogu talagalay jimicsiga. Hadiyaddu waxay ku timaaddaa sanduuq cad oo caadi ah oo Apple ah oo ay ku yaalliin 3 siddo oo jirdhis ah oo dusha kaga xardhan. Waxa kale oo ku jira sanduuqa kaadh yar oo shaqaalaha loogu hambalyeeyay guusha ay gaadheen.
Elad Wertheimer, Kenneth Ibana, iyo Francis Crane De Narvaez
Kaarku wuxuu ku qoran yahay, “Hambalyo dhammaystirka sannad -guuradii shanaad ee Loolankii Xidhxidhnaa. Shukumaanadaada hawada ku tuur oo rux, maxaa yeelay waxaad gebi ahaanba danaynaysaa jidhkaaga, caafimaadkaaga, iyo saaxiibbadaada. Waxaa sii dheer, caadooyinkaas caafimaad qabka ah iyo isku xirnaanta aadanaha ee aad nuugtay intii lagu jiray caqabadda ayaa ku anfici doona muddo dheer kadib markay dhammaato. Haddaba Kala fur fursadaha. Waad kasbatay »
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Kuwani waa qaar ka mid ah hadiyadaha ay Apple siiso shaqaalaheeda
Jiilka labaad ee AirPods ayaa lagu soo bandhigay 115 euro